admin – Codkasoomaalida.com
Author: admin	Ilka Case iyo Kiin Jaamac Yare	Author adminPosted on January 5, 2017Format VideoCategories FANKA IYO SUUGAANTA, Music	Midab aan la doorin iyo qurux hablihii hore u daa!	Quruxdii dumarkii Soomaaliyeed ee qarniyo hore iyo siday u ilaalin jireen wajigooda, qiimaha uu lahaa iyo caafimadka uu haystay.
Author adminPosted on January 5, 2017Categories Featured, MAQAALLO, WARARKA	Dhoolatus Siyaasadeed (Sawirro)	Siyaasiyiinta kala ah Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed, Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble oo dhammaantood ah musharrixiin madaxweyne, ayaa Magaalada Muqdisho ku sammeeyay dhoolatus siyaasadeed oo ay dabcan u muuqday mid ay ku qalqal gelinayaan Madaxweyne Xasan Shiikh oo isagu doonaya in mar kale xilkaas loo doorto.
Author adminPosted on January 5, 2017Categories Featured, WARARKA	Haweeney tuurtay ilmo ay dhashay oo la soo qabtay (Dhegeyso)	Ciidamada Ammaanka ee Magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen Haweeney ku tuurtay goob qabuuro ah ilmo yar oo ay dhashay.
Dhamme Cumar Macalin oo ah Taliye ku xigeenka Booliska Degmada Cadaado oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen Haweeneydaas kaddib markii ay ku soo wargeliyeen dadweynaha.
Waxa uu sheegay in caruurta yar ee lagu tuuray meesha Qabuuraha in ay soo qaadeen, isla markaana ay u sammeeyeen Gabdho caawiya ilmaha yar, isla markaana caano siiya.
Author adminPosted on January 2, 2017Categories Featured, WARARKA	INDHO-INDHEYN: Baarlamaan Hooy Qorshaha ku darso	Waxaa Qoray:
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, MAQAALLO, WARARKA	Magacyada Guddiga Doorashada ee uu Baarlamaanka Somalia magacaabay	Xildhibaanada Baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo Maanta markale kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magacaabeen guddi ka shaqeyn doona doorashada gudoonka Baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Guddiga ay magacaabeen xildhibaanada ayaa ka kooban 15 xubnood, waxaana lagu qeybsaday Nidaamka ay Soomaalidu wax ku qeybsato ee 4.5.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Axmed Biif oo laga joojiyay Bandhig Faneed uu ku qaban lahaa Muqdisho-VIDEO	Fannaanka Axmed Cabdikariin Biif ayaa laga joojiyay bandhig faneed uu xalay ku qaban lahaa Magaalada Muqdisho.
Fannaanka oo bartiisa facebook soo dhigay farriin kooban oo uu kaga hadlayo bandhig faneedka laga joojiyay.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, MUUQAAL, WARARKA	Puntland iyo Galmudug oo heshiis ku kala saxiixday Muqdisho (Sawirro)	Dowlad gobolleedyada Puntland iyo Galmudug, ayaa heshiis saddex qodob ah ka gaaray colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo kaddib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Guddiga Doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha oo la magacaabay (Dhegeyso)	Xildhibaanada Baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo Maanta markale kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magacaabeen guddi ka shaqeyn doona doorashada gudoonka Baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WAREYSIYO, World	Fowsiya Xaaji Aadan oo mar kale loo doortay Xildhibaannimo	Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo horay u soo noqotay ra’iiasal wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arimaha dibada Soomaaliya, ayaa maanta ku soo baxday doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada W/qooyi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Waxaa natiijada doorashada ku dhawaaqay guddiga heer dowlad gobolleed oo sheegay in Fowsiyo Yuusuf, heshay codadkii la dhiibtay 45 cod.
Waxaa siddoo kale xubnaha maanta ku soo baxay kuraasta aqalka hoose ee gobolka W/qooyi ka mid ah Muuse Ismaaciil, oo helay 48 cod.
Ugu danbeyntii, doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee matalaya gobolada waqooyi ayaa maraysa heer gabogabo ah..
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Posts navigation